Daily Reflection | Page7| Radio Veritas Asia
ယွၩအၪ့မၧၫ့လၩ့အဖိၪခွၫလၧဂၪ့ခိၪချိၫ့ယီၩ မွဲဘဲၫၥိၭ ၦဂၪ့ခိၪဖိၪၥံၪမိထီၩ့ဝ့ၫ လၧဆၧထိးထဲၩ့တၩ့ထဲၩ့လၧအဝ့ၫနီၪအကၠီၩ့လီၫ.
အဂဲးဘဲၫယီၩ ယွၩအဲၪၦဂၪ့ခိၪဖိၪ ထီးအဖ့ၪလၫ့ခွံၬအဖိၪခွၫအီၪဝ့ၫလဂၩဎး ဘဲၫၥိၭ ကယဲၦလၧအနဲၩထဲၩ့ဝ့ၫ လဂၩဂၩနီၪ မိဘၪဆၧဂၭ ဂီၩ့အ့ၬ. အ့ၪမွဲမိန့ဘၪဆၧမၧၫ့လၩ့ဆိၩလၩ့ကၠၪလီၫ. အဂဲးဘဲၫယီၩ ယွၩအၪ့မၧၫ့လၩ့အဖိၪခွၫလၧဂၪ့ခိၪချိၫ့ ယီၩ ဘဲၫၥိၭအမိစ့ၩရၫ့ၦဂၪ့ခိၪဖိၪမွဲအ့ၬ မွဲဘဲၫၥိၭ ၦဂၪ့ခိ...
Updated date: Wed, 04/22/2020 - 07:12
uqg,hE&~R xd;xJTwTxJTymQ vmtxd;1HEt1]vmxkUplW,EtvDTeDEvDE.
y1]rmYud]eHQ'h]tzmT< ybWvdW 1]t1Y< ybWvdW 1]rkqHY[HW tqmrQqmT bJE1d] t0hEu1dYpdQymQ vmuqg,GQ tbTtrktzmTeDWvDE.
Updated date: Tue, 04/21/2020 - 06:17
ဘဲၫၥိၭကယဲၦလၧ အနဲၩထဲၩ့ဝ့ၫလဂၩလါလါနီၪ မိန့ဘၪဆၧမၧၫ့လၩ့ ဆိၩလၩ့ကၠၪလီၫ.-
ယစံၭနၥံၪယီၩ နၥံၪဘၪအီၪဖျဲၪ နးဖၧၫ့ဒီၭတၭ ထီးဆီၫ့မီၪ့လၩ့လၭ လၧနၥံၪအၥၭလ ဂ့ၩ.- ဆၧလၧလံၩယီၩ ထီးဒၪအမိအူၪဘၪအၥၭလၧ ဆၧနးစီၪ့နီၪ အူၪဝ့ၫဒၪလီၫ. နနါဂၧၫ့လါနၫ့အၥီၫတၭ မွဲအဂဲၫခီၫခီၫလဲၪလ့ၩခီၫခီၫလဲၪနီၪ နၥ့ၪယၫအ့ၬ.
yuJWxU uqg,GQtzdWtvHQ< uqg[&HR txHQtzsJ1HWeDWvDE.
uqg,GQrQqHYxUymQ vmxHE'J 1]rkeDWvDE. yubWtDW *k;cmYvm yqm1lE0]qHY[HWqmtkQvTvzWtzmTeDWw]< yubWtDW1]rmY vm1]rkqHY[HWtqmrDTymQ< tqmvhQcdWvhQegtzmTeDWvDE.
Updated date: Mon, 04/20/2020 - 05:24
ၦအ့ၪလအီၪဖျဲၪဘၪလၧထံၫဒဲလၧၥၭမုနီၪ တၭနုၬထဲၩ့ဝ့ၫလၧယွၩအဘၩ့အမုးအဖၧၩ့ ၥ့ၪအ့ၬ.
ယ့ၫၡုၬချဲၩ့ဆၧၫ့ဆၧတၭ စံၭဝ့ၫဒၪ ယလီၩဘၪနၧၩ တီၩတီၩလီၩ့လီၩ့ယီၩ, ၦအ့ၪလအီၪ ဖျဲၪဘၪဝ့ၫနးဖၧၫ့ဒီၭတၭ မွဲအဒၪဘၪယွၩအဘၩ့အ မုးၥ့ၪအ့ၬ.
၄ စနံၭကဒံမၧၭစံၭအဝ့ၫ ၦလၧအၥၭၡါဝ့ၫနီၪ အီၪဖျဲၪ ဝ့ၫမိၥ့ၪဘဲၫၥ့ၪလဲၪ. မွဲအနုၬထဲၩ့ဝ့ၫလၧအမိအဒၧၩ့လး
၁၉ မၩအၥၭဘဲၫနီၪတၭ လၧမုနွ့ၫနံၩအထးဖၧၩ့မုခၪ့ ထံၭအနံၩနီၪဘၪလၧမုဂၪလၩ့တၭ အထံၩအဖျဲၥံၪ ၥၭမဲၪၦယုဒၫဖိၪအကၠီၩ့နီၪ အီၪကိၩ့အီၪကီၪ့ကၭဘံၭ ထၬတရၫ့ဂီၩ့ယူၭတၭ ယ့ၫၡုၬဂဲၫဆၧၫ့ထုၪ့လၧအၥၭ ကျၩတၭ,စံၭအဝ့ၫၥံၪ မွဲဆၧအမုၬအီၪလၧနၥံၪအလီၩ့...
Updated date: Sun, 04/19/2020 - 06:55
၉ နွ့ၫနံၩအကျၩ မုခၪ့ထံၭအနံၩဂီၩဂီၩလ့ၬအဝ့ၫဒၪဂဲ ထုၪ့ထဲၩ့တၭ, ဒုၭနဲၪဆိၫအၥၭ လၧနးမၫရံၫမၭဂဒၫ လံနံၫလၧအနၫ့ထၪ့ခွံၬယူၭ ဆၧနၪနွ့ၫဒုၩလၧအလီၩ့
၁၀ လဂၩနီၪလီၫ.- ၦအီၪဝဲၩဝ့ၫ...
Updated date: Sat, 04/18/2020 - 13:17
၁ လၧဆၧနီၪလဖၪအလးခဲၫ့တၭ ယ့ၫၡုၬဒုၭနဲၪဒီၭအ ၥၭလၧအထံၩအဖျဲၥံၪအမ့ၬယၫ လၧကွံၩတဘံရအၭ
၂ အနဲၩ့ထံၭနီၪလီၫ. ဒုၭနဲၪအၥၭဘဲၫယီၩ- စစဲမၧၫ့ပံ တၧၫ ဒဲစထီမၭလၧအကိၭဝ့ၫစဒံဒမၧၭ ဒဲၦက...
Updated date: Fri, 04/17/2020 - 11:04
uqg[&HR tDW0hEvTxH;vTqH] vmtxHQtzsJ1HWt1d]vDE.
uqg[&HRxJTxU,l]vmrl]cdWtzmT,l]vgeEh< bJEt0hE pH]0JT0hEt1d] < ,utDWvme1HWt1d] rkudQeHQ'h] xD;*UcdW,DQtxkRvDE. Uqg,GQ tDWrmY0hE vTxH;vTqH] vmtqmtDWuDUzmT< vmtpJ]u&rJEwlQ1HWtzmT< vmtvltxEtzmTw]< t0hEzhW*J;zhWb]ymQ<...
Updated date: Fri, 04/17/2020 - 05:33
အဝ့ၫၥံၪလီၩလၩ့လၬလၩ့ ဆၧမၩအၥၭလၧဖၧၩ့ၥၭနီၪ ဒဲအဝ့ၫဒၪဒုၭၥ့ၪယၫအၥၭလၧ အဝ့ၫၥံၪ ဘဲၫၥ့ၪလဲၪဘဲၫ ၥ့ၪလဲၪလၧဆၧကံၪ့ဘျ့ၭကိၪနီၪလီၫ.
၃၆ အဝ့ၫၥံၪချဲၩ့လိၬအၥၭအဘိၩ့ဘၭzတၭ အနၫ့ဆါ ဒၪဝ့ၫအီၪဆၧၫ့ထုၪ့လၧ အကျၩတၭ စံၭအဝ့ၫၥံၪ...
Updated date: Thu, 04/16/2020 - 12:09